Category: Geerarsa wallaggaa
18.10.2020 Gaktilar Comments
Badhaadhina Afoolaa Afaan Oromoon ittiin beekamu keessaa tokko geerarsadha. Geerarsi bara dhufaa darbaa kan hawaasni haala jiruufi jireenyaa isaa, gaddaafi gammachuu isaa, obsaafi hamilee isaa ittiin ibsatu. Hayyuun seenaafi aadaa Obbo Charinnati Waaqwayyaa, geerarsi dhaadannoodha yookaan ammoo beennata jedhamee beekama jedhu.
Namni jiruufi jireenyasaa yeroo gaggeeffatu geerarsaan kan jedhan hayyuun seenaa kun, geerarsi qalbii namaa fuudhee kan deemuufi humna qabudha jechuun ibsu.
Geerarsi miira kamiyyu ni ibsa. Gammachuu, gadda, roorroofi haala namni itti jiru kan agarsiisu afoola waan baayyee of keessatti qabatudha jedhu. Akka Obbo Charinnat jedhanitti taanaan geerarsi bakkaafi haala itti geeraramutu barbaachisa. Kana jechuun, geerarsi yoomessa mataa isaa ni qabaata jechuudha. Inni daldalu yeroo daldalaaf deemu geeraruu danda'a. Inni [doonii] oofus, inni xiyyaara oofus bakkuma bakka isaatti haala keessa jiruufi waan hojjetu geerarsaan ibsata.
Hanga ammaatti gosa geerarsaa qorannoodhaan adda bahan sagaltu jira jedhu qorataan aadaa fi seenaa Obbo Charinnat. Kunis jifaara saglan geerarsaa jedhama jedhan. Jifaara geerarsaa kana keessaa ka'umsa kan ta'e faarsuu jedhama. Faarsuun kun ammoo mataafi mana ofiirraa jalqaba jedhu. Jiruufi jireenya keessatti geeraraan tokko mana isaa, maatii isaa, haadhaafi abbaa isaa faarsuurraa jalqaba kan jedhan Obbo Charinnat, achirraa ammoo lammii isaa faarsuun geeraruutti darba.
Kana malees, midhaanis faarsuun, loon isaas, jiruufi jireenyas faarsuu ni danda'a geeraraan tokko. Hiriyyaa isaallee faarsuu ni danda'a namni. Jifaarri geerarsaa lamaffaan geerarsa gootaadha jedhu hayyuun seenaafi aadaa kun. Dura gooti eenyudha kan jedhuu beekamuu qaba.
Akka Oromootti goota jechuun jedhan, "Nama ummataaf dararameefi wareegamedha. Namni geerarsi gootummaan geeraramuuf kana keessatti ilaalama. Akka Obbo Charinnat jedhanitti geerarsi gootummaa nama ni madaala. Oromoon waan sadii ilaaluun gootummaan faarsa--goota, arjaafi beekaadha jedhu.
Kanaaf, kan hin jirreefi hin qabneen hin geeraramu. Kan geerartu kan ummata biratti mirkanaa'aa ta'eefi ummati kan beeku ta'uu qaba. Jifaarri geerarsaa kan biraan, geerarsa ajjeesaadha. Akka isaan jedhanitti ajjeesaa kan jedhamu addamsituudha. Eeeboon shaanfoo jedhamu jira, eebootiin darbatee waraanee ajjeesuun geerara.
Itti aanee kan jiru ammoo geerarsa qonnaan bulaadha jedhan. Qonnaan bulaan waa'ee omishaafi midhaan isaa geeraruu ni danda'a. Geerarsi inni shanaffaan geerarsa daldalaati akka Obbo Charinnat ramadanitti. Hojiin qonnaan bulaafi daldalaan tokko miti; geerarsi isaaniillee akkasumadha.
Lakkoofsa isaa situ beekaa … jedhaa geeraraa harree oofu jechuun yeedaloodhaan miidhagsanii ibsu. Geerarsi kan biraan geerarsa cigoodha jedhu.Diinni motummaan Habashaa kallatiin sanyii uummata Oromoo lafa irraa duguuguuf milkaawu yeroo hanqateetti tarsiimoo afaan, aadaa, fi seenaa Oromoo ittiin dhabamsisu baafatee sochowe.
Angoo waranaa fi tumsa motummoota alagaa fayyadamuun biyya Oromoo jaarraa tokkoo fi cina waggoota oliif motummaan weraree jiru kun acuccaa afaan Oromoo irratti gessisuu bifa adda addaan fufee raawataa turee fi raawatasi jira. Acuccaan bara — afaan Oromoo irratti raawataman warri gurguddoon armaan gaditti tarrifamu: 1ffaa Moraa mana barnotaa kessatti afaan Oromoo dubbachun dhorkamuu; 2ffaa Afaan Oromoo barresuu fi dubbisuun dhorkamuu; 3ffaa Afaan Oromootiin Waaqayyo waaqessuun dhorkamuu; 4ffaa Qora-qalbii adda addaa fayyadamuun ilmaan Oromoo afaan Oromoo haasawutti leeyyaasisuu; fi 5ffaa Odeefannoo afaan Oromoon karaa raadiyoo tamsaasuun dhorkamuu.
Fakkenyaaf gaazexesitoota yeroo jalqabaaf sagantaa radiyoo afaan Oromoo magalaa Moqaadishoo, biyya Somalee, kessatti bara ta hundessan irratti motummaan Habashaa waraana qindeeseen basaastuu fayyadamee gazexesaa Oromoo, Ayyubi Abubakar, ajjeesise. Qabsoo afaan Oromoo qaroomsuu bara — Karaa roga qabsoo bilisummaa afaan Oromoo hojiin eegalamee milkoomina hojii qabsoo bilisummaa Oromoof qooda guddaa gumaacheera.
Hayilee Fidaa raawatan seenaa qabsoo bilisummaa afaan Oromoo kessatti iddoo guddaa qabu. Afaan Oromoo badiisa irraa hambisuuf hojiin hoogganummaa Hiikaa Awaaji Onesmoos Nasiib dhaan raawatame seenaa qabsoo bilisummaa afaan Oromoo keessatti sadarkaa olii qabatee jiraata. Hiikaa fi Asteer fi Liidiyaa hojiile barruulee afaan Oromoo bara irraa jalqabanii raawataa turan keessaan, waggoota 18 booda macaafi qulqulluu guutummaan gara afaan Oromootti hiikamuudhaan, Waxabajjii 10 bara maxxanfame.
Hojiin kun qabsoo bilisummaa afaan Oromoo keessatti milkoomina sadarkaa olii argamsiise. Akkasumas barrulee aadaa Oromoo bifa wedduu, geerarsa, walaloo, mamaaksa, fi kkf barreessuu irratti qoodi Aster Gannoo, Abbaa Gammachiis Onesmoos Nasiibfi Lidiyaa Damboo gumaachan waan laayyootti ilaalamu miti. Fakkenyaaf akkataa barsiisa afaan Oromoo fi wedduulee fi mamaaksa Oromoo isaan qubee saabaan barreessan fi bifa kitaabaan maxxansiisan waggota booda gara qubee afaan Oromootti J.
Abbaa Caalaa Lataan jijjiiramee bifa haaraan maxxanfamee yeroo ammaa mana Waldaa warra Wangeelaa Eriteriyaa keessatti argama. Kana booda bara ergamtooti wangeelaa warra Siwudinii, lubi Maartiin Noordifeelt fi haadha manaa isaa fi narsii Heelmann Oolson, magaalaa Najjootti galanii akkuma Najjoo seenaniin mana barumssaa isa Onesmoos jalqabee ture bananii barsiisuu itti fufan2.
Afaan Oromoo tiksuuf qabsoon hoogganummaa sheek Bakrii Saphaloon geggefame seenaa qabsoo bilisummaa afaan Oromoo keessatti sadarkaa olii qabateera. Bara keessa walaloolee fi barnooti aadaa Oromoo sheek Bakrii Saphaloo barressee dhiyessaa ture uummata Oromoo baha Oromiyaa dammaqsuun qabsoo bilisummaa afaan Oromoof hiriirsuudhaan bara Waldaa Afran Qalloo WAQ hundeesuuf milkaaweera5.
WAQ hundee sochii qabsoo bilisummaa afaan Oromoo ti. Hoogganummaa sheek Bakrii jalatti qabsoo bilisummaa afaan Oromoo geggefamee kessaa hawisoo bebbeekamoon akka Biftuu Ganamaa, Urjii Bakkalchaa, fi kkf hedduun dhalataniiru. Walliftooti sochiilee bilisummaa afaan Oromoo keessatti bara sani hirmaatan warra akka Ayyuub Abubakar, Mohammed Rashaad, Shantam Shubbisaa, fi kkf turan.
Sheek Bakrii barruudhaan falmuun tarsiimoo mootummaan Habashaa afaan Oromoo dhabamsiisuuf saganteeffatee ture sani saaxile. Qubee fi giraameera sirna bareefamu fi dubbifamuu afaan Oromoo hundeessu keessatti qabsoo bara — Dr. Haayilee Fidaa hooggane seenaa qabsoo afaan Oromoo qaroomsuu keessatti sadarkaa olii qabatee jiraata. Haayilee Fidaa hayyuu afaan Oromoo fi abbaan qubee afaan Oromooakka afaan Oromoo dubbachuu, barreessuu, fi dubbisuudhaaf uummati Oromoo mirga seera uumamaa irratti hundaawe qabu beeksiseIt is an expression of love for both his countrymen and his country as well as a celebration of the diversity of Oromo culture.
This is a traditional folk song from the Wallaggaa region of Oromia. It is typically sang by a guy to a girl in the communal Wallaggaa style of dancing in a circle around the singer. If you have any traditional folk songs that you want me to post please send them to me, especially from regions other than Wallaggaa because my knowledge is very limited when it comes to that. Damee koo kottu akka taanu, Yoomilee gargar hiin baanu, Damee koo kootama boyee, Dabalee dheegee jalesaa, Watilee soolana ijoollee, Damee koo eegdee dandessa.
Amhara jechaan Wolloodha, Wollo gadjalaan arreeda, Magalaa jechaan qaloodha, Qaloo akka Gadaa maseena. Abbaan kee dheeraa gabaaba, Ijja saani keessa malee?? Haa ijaaru abbaan ijaaree Ani hin dhisu dagalee koo Haa hinaafu abbaan hinaafe Ani hiin dhisu jalalee koo. Dachee keerraa margee. Kan sittii baqateef, Kan sirraa dhalatees. Maaloo, ya ilmaan koo quxusuu, Maaloo, ya ilmaan koo hangafaa, Maaloo, ormayyuu guddisee, Dabarseefi boonsee, Maa dabaree dhabaa, Jette Oromiyaan, Jette harmeen boossee.
Jiituu boonaaf gannaa, Kan uumamaan toltee, Jannata ardiittii, Kamtu siin qixxaatee? Biyya too Oromia, biyya sirna gadaa, Kan ittiin beekamtuu, mallatoon ishii odaa, Anis biyyan qabaa, kanan ittiin dhaadadhuu.
Biyya too Oromia, kan an jiruuf abdadhuu. Baddaa fi gammoojjii, gaarraniif raarotaa Kan ormaa ni quufa, haadha beeyladootaa Haadha beeyladootaa. Gosti shimbirroolee, kan halluun faayyamtee Bineyyiin adda addaa, bosona ishii guutee Bosana ishii guutee. Biyya too Oromia, biyya sirna gadaa, Kan ittiin beekamtuu, mallatoon ishii odaa, Anis biyyan qabaa, kanan ittiin dhaadadhuu, Biyya too Oromia, kan an jiruuf abdadhuu.
Ittiin bulmaatni ishii, seera abbaa gadaattii Dimokraasiin mara, ilmaan ishii haammattii ilmaan ishii haammattii. Teessoo na gaafannaan jedheen Oromiyaa, Dhiiga lafee tiyyaa, Biyya abbaa kiyyaa. Namni abbaa malee hin dhalatuu, Biyyan qabaa kan na boonssiftu, Onnee tiyyaa, Tiruu tiyyaa. Aadaa hayyuu, ogeessa maraa, Yaa jaalatamtuu, biyya goototaa, Eebbifamtuu, biyyee biyyarraa, Ya Oromiyaa, fakkee jannataa.
Ana kankee, an ilmikee dhufaan jiraa, Hammasittuu salaamataa Ana kankee, tokkichikee dhufaan jiraa, Hammasittuu salaamataa. Dargaggoon kee, mammagaallanii, Dhedheeroo afroo, mudhii sinnaaraa, Shamarran kee, babbareedina, Ilkeen aannaanii, wayyaan areeraa. Arjoomakee, an oggayyuu na mararaa, Akkam godheen, sirraa turaa, Arjoomakee, an oggayyuu na mararaa, Akkam godheen, sirraa turaa.
Posts Ask me anything Archive. Anni so nen esseera?? Neegaa kessa qooqootee,?? Roorooftee jibbee taatte?? Baalooftee biyaa baate,?? Muraate maatta chiini?? Gaafa Oromiyaa seente??Oromoon nyaata heedduu qaba. Jalqaba nyaata ykn dhangaa kanan tarreessa. As jalatti kan ramadaman nyaata ija midhaaniirraa hojjetaman kan akka biddeenii, caabetaa, marqaa, mooqa, daabboo,maxinoo, cuukkoo, nuugii, saliixii, fi kkf faa dha.
Cuukkoo, fi caccabsaan garbuu ykn qamadii irraa hojjetamu. Sana booda ni daaku. Erga daakanii booda dhadhaadhaan sukkuumu. Soogiddi illee caccabsaatti baayyinaan dabalama. Nyaata gabbinaa Proteins : warri kun foon, lukkuu,hanqaabuu buphaaqurxummii, haannan, itittuu, baaqilaa, akurii atarii, fi kan biroo irraa argamu.
Kuduraafi Fudura Fruits and Vegetables : Kana jalatti kan ramadaman warra akka:. Maangoo, muuzii, loomii,burtukaana, mandariina, abukaadoo, paayin appilii, paappayyaa, appilii fi kkf. Qaaraa ykn mimmixi illee as keessatti ramadama. Oromoon guyyaatti akka aadaatti yeroo sadii nyaata. Kunis ciree, laaqana, fi irbaata taha. As keessaa muraasa maqaa dhahuun yaala: uffata dhalaa: qamisii, gurdii, marxoo,marata, faaya, naxalaa,kophee fi kan biroo hedduun jiru.
Hub: gara fuulduraatti qorannee barreessina. Faayi warra akka warqee harkaa, mormaa, gurraa,fi hanbaarrii, hanbaarrii ka biroo, faaya mataa, fi faayyi mormaa hedduun ni jiru. Uffata Dhiiraa: qumxaa, kittaa, kofoo, bolaalee ykn surree,kootii, marxoo, surrii, naxalaa, fooxaa, faaya, fi kkf. Hub: gara fuul duraatti ballinaan ibsama.
Oromoon mana muka, dhagaa, sibiila, qorqorroo, citaa, simminttoo, dhoqqee fi kkf irraa hojjechuun keessa jiraata. Dinagdeen haala manneetii Oromoon keessa jiraatanii haalaan murteessee jira.
Kun gara fuulduraatti yeroo mootummaan Oromoo dhugaa tokko dhaabbatu haalaan irratti hojjechuu kan feesisu ke.
Aadaa Geerarsa Oromoo: Jifaara saglan geerarsaa beektuu?
Amma garuu umurii 18 olitti irra guddaa dargaggoo fuudhaa fi heerumaa jiru. Maatiin gurbaan mariyachuun eega barbaadani, qomoo qoratanii, murtteessu. Gurbaan erga itti amanee jaarroleen mariyatanii, jaarsa ergatu. Jaarsis beellamma gaafatee warra maatii kadhata. Yeroo kana warri hintalaa yoo itti amanan beellama laatu.
Gara walakkeessaatti gurbaan ni naqata, kun jechuu hintalaaf warqee fi uffata erga jechuu dha. Egaa fuudha malee maaltu haferee! Lakkii, yeroo birraan dhufu ykn ayyaanni gurguddaan dhufu maratti dibicha ,raada ykn gaala erguu qaba gurbaan.
Qabeenya kana funaanuuf jecha warri hin talaa lafarra butu. Intalli manatti hafte ykn nama itti heerumuu barbaadde waan duudhaa fi aadaa guuttattee mana warra gurbaa dhaquudha. Butiin fedhii fi beekumsa intalaa malee humnaan fuudhuudha, kuni amma waan seeran dhoowwameef hafaa dhufeera.The generation of light…the generation conviction…you are and always and forever will be the guardians of our country and people! Waraanni nama nyaataa Xoophiyaa kan Dr Abiyiin ajajamu ummata oromoo Wallaggaa nagaan jiraatu irratti jimlaan dhokaasa irratti banuun ummata nagaa jimlaan ajjeesaa jiru.
Abiyi, Qawween faashiniinsaa darbee jira utuu jedhee sobee lallabuu faashiniin saba oromoo ajjeesuun garuu darbuu dide. Kun ammoo salphina guddaadha saba oromootiif.
Halagaan amma tooftaadhaan qarqara dhaabattee karaa ergamtootashee Ilmaanuma Oromootiin saba Oromoo waraansisaa jirti. Kanaaaf Oromoon yoo gamnoomeef hatattamaan furmaata barbaaduu qaba. Ilmi oromoo tokko halagaaf baabsee lammiisaa miidhuu hin qabu. Milkesa Hailu. Dur kan ajaju wayaanee kan raawwatu ykn ajjeesu, hidhu OPDO ture.
Amma garuu muummicha ministeeraa waliin ministeerota Oromoo kudha tokkoo olitu aangoo bakka furtuurra jiru. Yeroo ammaa kanatti abbaa hubatee ilaaleef: taphataan, taphachiisan, kubbaan fi dirreenis hundi Oromoo fi Oromiyaa irratti taatee jirti.
Warri halagaan amma tufoozoo cimaa naannessanii Harka rukutaafii jiru. Jabaadhaa walfixaa jechaa jiru. Alamaayyoo Birruu fi obbo Tashaalaa Abarraa waliin taasifne. News Ticker. News [ April 17, ] U. Copyright kichuu.Oromo News. African News. Formerly Oromia Quarterly. Goojjam Matakkal Jirtuu? Ijoolleen Raayyaa Jirtuu?
Raayyaa Raayituu Jirtuu? Ijoolleen Walloo Jirtuu? Walloo Kamisee Jirtuu? Ijoolleen Wallaggaa Jirtuu? Ijoolleen Arsii Jirtuu? Ijoolleen Booranaa Jirtuu? Ijoolleen Tuulamaa Jirtuu? Dumesaaye caamaaree?
Caamus hongee taharee? Namni ibidda beeku daara argee nahaaree? Dhiigni qeerroo inni jige itiyoophiyaa jigde kaase kaa Dhiigni qeerroo inni jige itiyoo-ertiraa walitti araarsee kaa! Finfinne Tribune Gadaa.
Saliha Sami releases its long awaited resistance music video pic. This week, Wole Soyinka, the first African to win the Nobel prize in literature, said he wanted another award: The Grammy. He was highly talented and gifted artist and selfless. He was very incredible.
May he rest in peace! Dabalaa Damee nama walleef artii Afaan Oromoo keessatti bakka guddaa qabudha. Jireenya isaa guutuu artii saba kanaaf hanga dhumaatti nama cichaa turedha. Biyyoon isatti haa salphatu. Eebba kana irratti sabboontoti Oromoo fi aartisotooti Oromoo hedduun argamuun guddina afaanii fi aadaan Oromoo kanaan kan nu gahe qabsaawota lafeefii dhiiga akkasumas lubbuu itti wareeganii asiin nu gahe hedduu galateeffatna jechuun dhaamsota jajjaboo guddaa dabarsanii jiru.
Keessummoota argaman gaazexxessaa Ibraahim Haajii aragamanii haasaa ijaaraa fi onnachiisaa taasanii jiru. Yeroo konsertii fi eebbaa Albama kana irratti sabboonti Oromoo argamanii aadaa fi eenyummaa saba Oromoof gumaacha taasisanitti ergamtooti sirna abbaa irree Wayyaanee ammo dhimmi diaspora jechuun akkaataa itti uummata Oromoo qorqalbii cabsan irratti mariyachaa turan.
Interview on OBS:. Oromia: Dhugaan Maseenaaree!! Jirra, Jirtuu? Nansobee ijoollee oromoo? Nansobee ijoollee biyyaa koo? Ichilbee daarii Gobbuu, Maroolee koo maaloo, Ya sinnaara sararaa, Sitti obsee kee na godhuu, Waan ofii koo maaloo, Waltaana baranaa.
Jaarsi sawwan yaafatee, Maroolee koo, Dirreetti ooffatee dheechisaa, Wayi nama wal jaallatee, Waan ofii koo maaloo, Ija irratti beeksisaa. Ammayyaa Bulloo Boshee Kuulanii koo, Bareedduu xiqqoo rosee. Maal wayya magaaltittii, Najjoo irraa moo Ginbitti si eegaa, Eessatti naaf dhuftaa, Barrisii na koottuu, Yoo tiyya taatee, Maaliif na dhibsitaa……….
Caqasaa, wal dhageessisaa, waan dhageettanis hojii irra oolchaa. Oromian Economist.Fagaroo 1. Gundhabee Waalee Waajaroo Lubaayaa Goonaa 2. Karaalee Baabboo. Abbaadhoo 4 Abbayyii 4 Gutayyuu 4 Arroojjii 7 Tuulama 1. Kodhallee 1. Yaasaa A Sadeen Oboo Sirbaa 2. Amuumaa 2. Kuutayyaa 1.
Baachoo Kuraa 3. Diiramuu 3. Guuleee 2. Balaalo 4. Sobaalee 4. Maaru 2, Dullachaa 2, Baaduu 2, Corroqoo 2, Buunnii 6. Dullacha 3, Dhanqaa 3, Buraaqsaa 3, Abuunni 3, Daada 7. Biyyoo 4, Adaanoo 3, Abuunni 4,Ooyloo. Hirmaattoonni kora caffee gadaa Raabaa Doorii kuniis dhiibbaa tokko malee bilisaan yaada isaanii dabarfatu. Kana malees, sababa bishaan dhugaati fi lafa margaatin walitti buinsa gosa jiddutti uumamaa ture furmaata itti keennuun nageenyaa ummata jiddutti buusaa ture.
Sirni gadaa kun Aadaa,duudhaa,afaan,seenaa fi Amantii saba Oromoo akka hin banne eegee dhaloota irra dhalootatti akka dabru taasisuun guddina Aadaa fi eenyuummaa oromootif gahee bahaa ture. Gama biraatin gosoonni Afran Qalloo hundi bulchinsa Raabaa Doorii kan mataa ofii qabaachaa turan. Korri gosaa kan rakkoolee xixiqqoo gosa jiddutti umamtu furmaata itti kennuun nageenya hawaasaa tiksu Raaba jedhama. Dooriin waraana gadaati. Hojiin waraana doorii diina ummata irra ittisee nageenya hawaasa Oromoo tiiksuudha.
Hoggantoonni sirna gadaa raabaa doorii karaa dimookiraasiitin ummatan filamanii waggaa saddeet,saddeetin aangoo walif dabarsaa biyya bulchaa turan.
Gama kaaniin gosti Oromoo Anniyyaa Jaarraa kudha saddeetaffaa irra eegalee Caffee Gadaatin of bulchaa turuu isaani seenaan manguddoota oromoo irra argame ni ibsa. Akka manguddoonni kunneen jedhanitti teessoon caffee gadaa Oromoo anniyya Diida Anniyyaa ykn Burqaa Tirtiraa jedhamti. Innis akka armaan gaditti ibsama. Gadaan sirni ittin bulmaataa Oromooti Gadaan maqaa waliigalaa kan ittin bulmaataa dimookiraatawaa taheedha. Sirna dimookiraasii hayyoota Oromootiin uumameedha. Sirni gadaa heera saba Oromoo guutuu kan siyaasaa, dinagdee fi hawaassummaan sabichaa ittin murteeffamuu dha.
Kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee itti walii galu wabii tokkummaati. Gadaan sadarkaa umriiti Sirni gadaa sirna dhalli Oromoo hoodaa fi itti gaafatama adda addaa kan itti qabatanii dha.
Namni tokko sadarkaa gadaa tokko keessa bara saddeet qofa tura. Yeroo sadarkaa gadaa tokko irra kan biraatti cehu sirna adda addaatuu raawwatama. Sadarkaaleen gadaa kunis akka armaan gadiitti dhihaatu.
Mel scale spectrogram python
Netflix mod exe
Ac coupon test stations